Maqa Baratoota Oromoo Ajeefaman, Mada’aan fi qabamani hidhaman
Oromoo hundi kara hunda, biyya hunda keessati, Enyuuma Oromoof falalmacha jirtan galata qabduu. Haawwasi Oromoo biyya keessa dhigga isaa dhangalasa jiru amalee qabsoo ittti fufee jira. Hata’uu malee TPLF/OPDOn Araara jeechun bakka hundati uumataa waltii wamuun soba gara hin qabnen uumataa burjajeessa jirtu. Fakeenyaf Obbo Muktari Kadiri Baratooni University hunda barumsa egalan jiru, rakko tokko iyuu hin jiru jeechun soba dhugaa hin fakanee media irrati ibsee jira, haqii jiru garuu baratooni Oromoo university hunda keessa qabamani hidhama jiru, haaluma kanan University Ambo, Wellaga, Finfinnee, Madawalabu, Haromaya, Diredawa, Jimma keessa Oromo waan ta’aanfi qoofa hidhama jiru. Amma baratoota universiitii wallaga keesssa qabanii hidhaa jiruu, akkasuma illee federaalin kaampaasii keesssaa guute jira jeechun baratoon iyyacha jiru.
Baratoon Ogbaruu Oromoo guddisuuf Kitaba Afaan Oromoon baraseen akka diinati ilaalamuun utu dhagga tokko hin darbiin, utuu yakka tokko hin dalagiin Oromummaa isaanti yakama jiru. Nami Harka fi harkati utuu yakka hin dalagiin mana isaati ykn University keessa baratoota naggna qabaman hidhamun jeequmsaa kan ni babalisa malee hin qabaneesuu. Kanaafu Haawwasii Oromoo biyya keessa fi biyya ala jiru Ijoole baratoota hidhama jirtu irrati caalisuu hin qabu.
Kara birra Obbo Abba Dula Gamadaa L/Wallaga keessa adeeme Godiina Adda Oromiyya Finfinneeti dabaluuf karoori tokko iyuu hin jiru jeedhe soba jira. Abban Dula Afanyyii Paarlamaa Federla ta’ee utuu jiru lafi Oromiyya Heera Federalan Dangeefame Oromiyyan Wagga 23 gutuu irrati invest goodha ture ni fudhana jeechun Heera federala diigu ta’uu isaa Abban Dula Gamada dagachuu hin qabu ture. Godiin Adda Oromiyya Oromiyya jalati Misooma adeemsisuu fi Maaster Plan mataa ishee qoophefachuu waanti dhorkuu hin jiru. Gochaa fi Jeechoota Ittiananan Kantiiba Finfinee (Abbawu Sitota) fi Matwos Asfaw) jeequmsaf sababi kan ta’aan utuu jiran, ijoole Oromoo lafa isaanif mirga isaanif kara nagga falmatan Ajeesun, hidhuun dararuun dirqisan gudeedun Waraana fi Polisin Federalan raawwatama jiru Obbo Mukatar Kadiiri dhabisisuu qaba ture, ini garuu yakkamtoota Lubu nama 100 baleessan dhisee ijoole Oromoo yakkun isaa yakka yakka caluudha.
Adee Damiti Hambisa fi Aster Mamoo Ijoole Oromoo dhiigi dhagla’ee akka hadhaa Oromoo tokkoti gaduuf dhisun isaani, Dubartoota Oromoo hunda birrati gaafi gudda kasee jira, Immaani Dubartota Oromoo maliif akka Adee Aster Mamooti hin dhaga’amnee gaafi ta’ee jira, Adee Aster ilee Hadha ijoole tatee dhala Oromoof gaduu dhisun ishee maliif?; Adee Damitu Hambisa Finfinnee keessatii Afaan Oromoon yoo mani barumsa banamee lammin birronsi nuf habanamu jeedhani Finfinnee waan gafatanif dhifnee jeechun waan hin fakane deebsani jiru. Keesuman mana dhufee moo wara manatuu mana isaan irrati mirga qaba? OPDO TPLF dura dhabatan fi falmachuu waan dadhabanf uumata isaa danda’anti boba’uu egalan.
Heera Federala Ethiopia danga Oromiyya heeran mirkanayee cabsuun, muran fudhachuuf wara seera qoophese jeequmsaf sababa ta’etu yaakama dha.
Walgayii Adamaa irrati gaafi haqa Miseensoon OPDO dhiyeessanf “jalatansi jibitansi Finfnnee jala galuun Godiina Adda Oromiyya hin oluu” jeedhan Uumataa Oromoo tufachudha namii deebisee Obbo Abbawu Sitota, Matwos Asfaw, kkf Jeequmsa kanaaf kan gaafataman dha
Hiiriira Baratooni Oromoo goodhan fi gaafi mirga deebisu mana Rasassan rukutuun rakko kana wara hameesetu itti gafatamuu qaba.
Hara iyuu tanan Motummaan furmata kara nagga barbaduu dhisee baratoota Oromoo qaroo ta’aan guree mana hidhatii naquun rakko kana caalatii babalisu waan ta’uuf Baratooni hidhama atatman gadii dhifaùmuu qabu.
Baratooni Oromoo yakka tokko malee Ajeefaman, Mada’aan fi qabamani hidhaman maqan isaa akka kana gadii jiruuf kan maqan isiin nu hin geenye Aannanee Oromiyya keessa hidhama jira heedu ta’uu isaan hubanchisa Oromoon biyya Adunya irra jirtan Mootummaa biyya jirtati, Europa Union fi Mootummata Gamtomantii akka iyyatanfi isiin gaafana.
1. Abebe gadafa
2 .Lataa Olani
3 .Alamayo Taye
4. Melaku Girma
5. Gaddisaa dabalee
6. Mulata Eliyas
7. Gamada Dhidhita
8. Nigusie Gammada
9. Gudata Wakne
10. Nigusie Yoosef
12. Sisay Safara
13. Indalu Yigezu
14. Taye Teshome
15. Jabessa ekele
16. Teshome Ararsa
17. Jamal Usman
18. Waqo Roba
19 Jilo Kamew
20 Yaatanii Utukan
21 Kebede Guddata
1. Abebe Taddese Political Science Addis Ababa University
2. Chala Dirriba Dirre Dawa University
3. Lencho Electrical & Computer Engineering Adama University
4 . Fawaz Ahmed Usman Mechanical Engneering Adama University
5 . Obsa Jawar Management Adama University
1. Ababa Kumsa M student Wallaga
2. Abdii Kamaal M student and Krate Trainer Gudar Gudar
3 . Abdiisaa Guutuu M 9 years old teenager - Gudar
4. Abdiisaa Fiixee Bussinessman Gudar
5 . Abdisa Nagasa M student Wallaga
6 . Alamnee Bayisa Tashoomee M 9th grade Ambo Ambo
7 . Alamayyoo Hirphasaa M 9th grade Ambo Ambo
8. Alemaayyoo Urgeessaa M Farmer Gudar Gudar
9. Baayisaa Soorii M
11 Biqilaa Belay M Merchant - Ambo
13 Darejjee M Kebele Milisha - Ijaajjii
21 Gosomsaa Baayisaa M Farmer - Ambo
29 Maammush Gaaddiisaa M Busssinessman - Gudar
30 Mammush Guutuu M 11 years old teenager - Gudar
33 Olmaan Biinagdee M Ganjii Gooree Farmer, 75 years Oromo elder - Ambo
34 Taddasee Gashuu M Waddeessaa,Ambo
35. Liibaan Machaa J.S.School Ambo Ambo
36 Tashome Dawit M Uni student Wallaga
37 Zabana Barasa M Governance 3rd year Jimma Jimma
17 Warquu ijjiguu M Bussinesman - Ambo